Google Glass ကို 2.0: ပထမဦးဆုံးဓါတ်ပုံတွေပေါ်ထွက်လာ - သတင်း Rule
Google Glass ကို 2.0: ပထမဦးဆုံးဓါတ်ပုံတွေပေါ်ထွက်လာ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Google Glass ကို 2.0: ပထမဦးဆုံးဓါတ်ပုံတွေပေါ်ထွက်လာ” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 29 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 12.19 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သော်လည်း ကပယ်သတ်ဖြတ် ယခုနှစ်ရဲ့အစမှာ, Google ကသူ့ရဲ့မျက်မှန်ဝတ်ဆင်ကွန်ပျူတာ၏ဗားရှင်းအသစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာစတုရန်းရည်ရွယ်.
တွင် အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်နှင့်အတူ FILE, ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီရှိပါတယ် ပထမဦးဆုံးရုပ်ပုံများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ထိုဒီဇိုင်းကိရိယာ၏, ယခုတစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ screen ကိုကိုင်ပြီးတစ်ခေါက်လက်မောင်းကိုတပ်ဆင်ထား.
သစ်ကို Google Glass ကိုဟာ့ဒ်ဝဲ၏နောက်ထပ်ပုံရိပ်. ဓါတ်ပုံ: FCC သည် / Google က
တရားဝင်, Google ကစက်ပစ္စည်းအသစ်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအသိအမှတ်ပြုမထားပါဘူး, ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-အာရုံစူးစိုက်ပြန်လည်စတင်ဇူလိုင်လကတည်းကလူထုအသိပညာခဲ့. သူတို့သညျကောလာဟလများလည်း Glass ကို၏ဗားရှင်းအသစ်ရေစိုခံနဲ့ Hard-ဝတ်ဆင်ဖြစ်တည်ဆောက်ကြောင်းအကြံပြု, ပိုကောင်းတဲ့ wifi ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်မျှော်လင့်ထားနည်းပညာပြန်တယ်, ပိုမိုမြန်ဆန်ပရိုဆက်ဆာ, နှင့်တိုးတက်ကင်မရာနှင့်ဘက်ထရီ.
ကုမ္ပဏီကဒီကိစ္စကိုအပေါ်ပြောကြားခဲ့သည်နောက်ဆုံး Glass ကို Google ရဲ့အဆင့်မြင့်သုတေသနအတွက် X ကိုဌာနခွဲအတွက်၎င်း၏စမ်းသပ်အနေအထားကနေ "ဘွဲ့ရ" ခဲ့ကွောငျးခဲ့သည်, နှင့်တိုနီ Fadell ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထားရှိ, အ iPod နဲ့သိုက် smart-home ကုမ္ပဏီနောက်ကွယ်ကလူကို.
အဆိုပါပြန်လည်စတင်အသစ်တစ်ခုကိုစားသုံးသူဗားရှင်းအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်. ယခုမူကားများအတွက်, device ကိုတစ်ဦးခေါင်းကို-တပ်ဆင်ထား display ကိုရှိခြင်းကနေချက်ချင်းတန်ဖိုးကိုရဖို့သူအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်ရည်ရွယ်ပါလိမ့်မည်. သိသာအသုံး-အမှုပေါင်းခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတို့ပါဝင်သည်, အသံတစ်သံထိန်းချုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်မှလက်ကိုလွတ် access ကိုအလွန်အမင်းအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်သို့စတင် re-လည်းကုမ္ပဏီရဲ့စားသုံးသူအသုံးပြုသူများတွေ့ကြုံကိစ္စရပ်များအများအပြားရင်ဆိုင်ဖို့ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ခွင့်ပြုမယ်လို့, အများပြည်သူနေရာများတွင်တစ်ဦးခေါင်းကို-တပ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာကိုဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေခဲ့သည်အထူးသဖြင့် privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်.
21407	0 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, Google က, Google Glass ကို, သတင်း, နည်းပညာ
← လိမ့်မည် 2016 virtual reality ဂိမ်းကစားခြင်းကိုချွတ်ယူယခုနှစ်ဖြစ်? အဆိုပါ 25 အများစုမျှော်လင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း 2016 →